Waxaa caawa (April 2, 2013) la soo gabagabeeyay mu’tamarkii dacawiga ahaa ee 1aad ee kampala oo soo billowday 29/3/2013, kulamo Diimeedkaas[Nadwa] taasi oo ay ka qeyb galeen Guud ahaan Soomaalida ku nool dalkan Uganda, Nadwadaan ayaa waxaa soo jeedinayey Culuma’aduun Soomaaliyeed oo caan kuwaas oo ka kala yimi Dalka Yurub,America iyo weliba Africa.
Siciid Maxamed Barre Gudoomiyaha Dacwada Ururka Al-Ahl ee Ardayda Soomaaliyeed ayaa gaba gabadii kulan diimeedkaasi ka sheegay in ay faraxad weyn u tahay guud ahaan Umadda Islaamka gaar ahaan Soomaalida in ay kulankaan soo abaabulaan.
Waxaa uu si rasmi ah u bilowday 29-03-2013 isaga oo soo dhammaaday 31-03-2013, waxaana looga hadlay arimo ay ka mid ahaayeen.
Faa,iidooyinka uu leeyahay guurka
Dhibaatooyinka soo foodsaara guurka
Is dhex galka raga iyo dumarka
Muxuu ka qabaa islaamku “JACAYLKA”
Kaalinta ay dhalinyaradu kuleeyihin hagaajinta bulshada ,
Kusug naashaha diinteen
Inaad dareentid masuuliyad
Mutamarka gabagabadiisii waxaa dardaaranno wax ku ool ah ka soo jeediyay culimadii duruusta ka jeedinaysay mu’tamarka, waxayna culimadu bulshada soomaaliyeed ee Uganda ku dhaqan kula dardaarmeen in ay diintooda barashadeeda iyo ku dhaqankeeda ku dadaalaan, iyo in ay ilaaliyaan wada jirkooda una midoobaan danohooda guud.
Sidoo kale waxay culimadu ku baaqeen in kulamda dacawiga ah ee noocan oo kale ah la soo celceliyo si loo sii xoojiyo wacyi galinta diineed ee bulshada waddankan ku nool. Culim’adda waa weyn ee Soomaaliyeed ee sida weyn uga hadlay ku dhaqanka shareecadda ayaa waxaa ka mid ahaa Sheikh Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur (Fu’aad Aflow) oo ka yimi Degaanadda Puntland, kana mid ah Aqoonyahanadda Soomaaliyeed.
Dardaarankii culimada ka dib waxaa madasha ka hadlay Sh. C/raxmaan Qaasim oo u mahad celiyay dhammaanba dadkii gacanta ka geystay in mu’tamarku qabsoomo, culimo,ganacsato,gudiyada dacwada masjidka, dumarka, ururka dacwada ardaysa soomaaliyeed ee Al -ahli iyo guud ahaanba qaybaha kale duwan ee bulshada sida ballaadhan u soo buuxdhaafisay goobihii duruustu ka baxaysay.
Ka dib waxaa shirka lagu soo xidhay bayaan uu akhriyay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada mu’tamarka Sh. Ibraahim Xirsi Galow oo taabanayay qodoba badan uu khuseeya jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool wadanka Uganda iyo guud ahaanba qurba joogta soomaaliyeed.
Culimadu waxay saaka muxaadaraad ka jeediyeen musallaha ciidda oo baryahanba ay dumarku duruus ku qaadanyeen,waxaana muxaadaraadka saaka kala jeediyay Sh. C/raxiim Abuu cayneyn oo ka hadlay xijaabka gabadha muslimadda ah,iyo sh. Abuu shayba oo ka hadlay sifooyinka gabadha mu’minadda ah.
Sidoo kale Sh.Abuu Xassaan ayaa salaaddii duhur ka dib masjidka towxiid ka jeediyay muxaadaro ka hadleysay sidii loo diyaarin lahaa dhallinyaro hoggaan noqota.
Salaaddii casar ka dib waxaa masjidka towxiid ka baxday muxaadaro ka hadleysay tiirarka uu ku taaganyahay qoyska muslimka ah, waxaana soo jeediyay sh. Maxamad cali Gadhle, muxaadarada ka dibna waxay culimadu ka jawaabeen qayb ka mid ah su’aalihii dadweynaha, salaaddii makhrib ka dibna waxaa la sii waday fataawihii oo ay culimadu si wada jir ah uga wada qayb qaadanayeen, ka dib 9:00kii fiidnimo ayaa la soo gabagabeeyay fataawihii, ka dibna waxaa la guda galay dardaarankii culimada iyo soo gabagabeyntii shirka.
Ugu dambeyntii waxaa kulan diimeedka uu ku soo dhammaaday jawi aad u faraxad leh, iyadda oo dadku ay muujiyeen rajo aad u wanaagsan.
Cabdiweli Xasan Gooni